Nezvedu | Yangu Mota Kunze
Isu tinobatsira kunyoresa mazana emotokari muUnited Kingdom mwedzi wega wega. keyboard_museve_pasi
Kwese uko mota yako iri pasi, isu tichakwanisa kubata nhanho dzese dzekupinza uye kunyoresa maitiro.
Isu tine pasirese pasirese evamiriri pane kondinendi yega yega kutipa isu kusvika parizvino ruzivo rwemuno uye chivimbo pese panowanikwa mota yako.
Tisu chete mutengesi wemota muUK kuti takaita mari yakawanda munzvimbo yeDVSA yakatenderwa yekuyedza saiti yedu. Izvi zvinoreva kuti vaongorori veDVSA vanoshandisa yedu yepayeti yekuyedza nzira kuti vape imwe yemhando mvumo kune edu vatengi mota.
Motokari yako inosvika panzvimbo yedu uye ichasiya yakanyoreswa zvakakwana pasina chikonzero chekuti iendeswe kunzvimbo yeDVSA. Nekuvapo kwedu kwepasirese uye kuzvipira kunoenderera kuzvinhu zvese zvekuteerera kweUK, isu tiri vatungamiriri vemusika mumunda medu. Kunyangwe iwe uri kuendesa wega mota yako, mukutengesa kuendesa akawanda mota kana kuyedza kuwana yakaderera vhoriyamu mhando mvumo kune iwo mota auri kugadzira, isu tine ruzivo uye zvivakwa zvekusangana nezvose zvaunoda.
Isu ndisu United Kingdoms inotungamira kutenga mota kunze kwenyika.
Saka pinda mukubata kune yekunetswa yemahara mota yekupinza ruzivo.